အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
APL-210N အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ဖြစ် တစ်ဦး signတစ်ဦးl စက်ကိရိယာ ဘို့ အဆိုပါ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု ၏ အခင်အရှင်, ပြသ အဆိုပါ အလုပ်လုပ်ကိုင် အခွအေနေ ၏ အခင်အရှင် အားဖြင့် အဆိုပါ ပွောငျးလဲ.AOX လိမ့်မည် mတစ်ဦးke greတစ်ဦးt ပံ့ပိုးမှုများကို သို့ အဆိုပါ အနာဂတ် နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး quတစ်ဦးlity APL-210N အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, အသစ်က နည်းပညာ တစ်ဦးnd ဆက်လက်နေသော cusသို့mer ဝန်ဆောင်မှု, တစ်ဦးnd ကြိုးစား သို့ ဖြစ်လာသည် တစ်ဦး globတစ်ဦးl leတစ်ဦးder တွင် အခင်အရှင် တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry တွင် အဆိုပါ 21 ရာစု။
ရာထူး indicator သည်ပွင့်လင်း: Close ကိုအဝါရောင်: နီ
1. APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ၏ switch ကိုသီးခြားစီ installed သည်အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အစားထိုး
APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက် coated 3. အစိုင်အခဲများနှင့်လှပသောဒီဇိုင်း, လူမီနီယံသေ-casting အိုးအိမ်များနှင့်အမှုန့်
IP67, NEMA4 တစ်ခု 4x
2xNTP1 / 2A
PT1 / 2A
8 ရမှတ် (0.08-2.6mm)Â²
စက်နှင့်ဆိုင်သော switch ကို x2
နီးကပ်ခြင်း အာရုံခံကိရိယာ x2
E ကို လက်စွပ်
Stabdard ဝင်ရိုး (17mm)
စက်မှု switch ကို (2SPDT) APL-210N
စံ switch: SS5GL(Omron)
2SPDT စံ (option ကို: SPST-NC, SPST-NO)
Contactor: 250V AC / 3A, 125V, DC / 5A
250V AC / 0.2A, 125V, DC / 0.4A, 30, DC / 4A
2SPDT switch ကို: (option ကို: SPST-NC, SPST-NO)
Contactor: 250V AC / 10.1A, 125V, DC / 10.1A
250VAC / 0.2A, 125V, DC / 0.4A, 30, DC / 4A
လက်မှတ်: ul, CSA, SEMKO, SEV EN61058-1
Proximity switch ကို APL-220NJ
စံ switch: NPN normally open
ဗို့: 6-36V DC က
option: EMC to EN60947-5-2
NBB2-V3-င2/ E3 (PNP): 10-30V DC ကအကွာအဝေး: 2mm
NBB2-V3-E0 (NPN): 10-30V DC ကအကွာအဝေး: 2mm
NBB2-V3-Z4 / Z5: 5-60V DC က
1. ကျနော်တို့အနှစ် 20 ကျော်အဘို့ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့် APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ R & D ကိုအတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
2. အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အချိန်မီအာရုံစိုက်, APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ, အမိန့်တုံ့ပြန်မှုလျင်မြန်စွာ, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သေးငယ်တဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ, လျင်မြန်စွာ UPS, DHL, TNT မှတဆင့်တင်ပို့နိုင်ပြီးဖောက်သည်လည်းပင်လယ်နားမှာကတင်ပို့ဖို့ရှေးခယျြနိုငျ လေထုနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ။
မေး: APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
hot Tags:: အခင်အရှင် အနေအထား ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
sensor ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
နီးကပ်ခြင်း ပွောငျးလဲ ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
Nema 4x ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော